ကြင်နာပြမှုတစ်ခု (Act of Kindness) | Local Resources Centre
ကြင်နာပြမှုတစ်ခု (Act of Kindness)
ပေးဆပ်သူများအသင်းသည် လူပေါင်း ၃ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိုသူများမှာ မလင်းလင်းနွယ် ၊ ဦးကောင်းမြတ်ဦး နှင့် မခိုင်သူဇာ တို့ဖြစ်ကြသည်။
ပေးဆပ်သူများအသင်းအနေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့နှင့်အတူ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်မဖော်ခင်က ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အလုပ်များကို ပြောပြရာ “အရင်တုန်းကတော့ ပျိုးခင်းအဖွဲ့ ၊ World Vision အဖွဲ့တွေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကို ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ခဲ့တာမျိုးတော့ ရှိပေမယ့် စီမံကိန်းရဲ့အရေးပါမှု ၊ ငွေရေးကြေးရေးစီမံခန့်ခွဲမှု စတဲ့ သဘောတရားတွေကို သေချာနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ အဲ့တုန်းကတော့ communityကိုဘဲ ဇောင်းပေးပြီး လုပ်ခဲ့တော့ ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်တာတွေလည်း အားနည်းခဲ့တယ် ဟု သိရပါသည်။
Pay Set Thu was sharing their activities
ထို့နောက် ထောက်ပံ့မှုရပြီးချိန် ၊ စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်မူ ကျေးလက်အဆင့် ကျန်းမာရေးာနများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ အစိုးရနှင့် ပြည်သူအကြား ကျန်းမာရေးအသိပညာဗဟုသုတများ ရအောင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းများကို အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ လူထုအသိပေးပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် တစ်ဖက်တွင်လည်း မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အချို့သော အစိုးရဌာနများသည် ပြည်သူလူထုထံ ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသော ဆန္ဒသာရှိပြီး လက်တွေ့တွင် ကျန်းမာရေးအသိပညာနှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတ ရှိမနေခြင်း ၊ ဆေးပေးခန်းများတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသောသူ အလုံအလောက်ရှိမနေခြင်း နှင့် ပြည်သူလူထုမှာလည်း ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲရှိသောကြောင့် နီးစပ်ရာ ဆေးစပ်သမားတော်များမှ ညွှန်ကြားသော ဆေးများနှင့် လွယ်လင့်သကူဖြေရှင်းကြခြင်း စသည်တို့မှာ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ချိန်တစ်လျှောက်တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရအောင် ဦးဆောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အချိန်ပေးတွေ့ဆုံတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ဖက်မှာလည်း ဒေသခံတွေကို အသိပညာပေးတဲ့အခါ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေရဲ့ သဘောတရားများရော ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများရဲ့ အခြေအနေတွေကိုရော နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မြင်လာဖို့ ဒေသအတွင်း ကောက်ယူထားတဲ့ Assessment ပေါ်အခြေခံပြီး အမြင်ဖွင့်သင်တန်းတွေ ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် ဟု ဦးကျော်မြတ်ဦးမှ ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ဖြင့် ယခုတွင် ကျန်းမာရေးငှာနမှ အသင်းအပေါ်ပိုမိုယုံကြည်လာပြီး ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုများကိုလည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာမှာ အသင်း၏ အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဒေသခံများမှလည်း မိမိတို့အဖွဲ့အပေါ်တွင်သာမက ငှာနဆိုင်ရာများအပေါ် အမြင်သဘောထားသိသိသာသာပြောင်းလဲလာကြောင်းသိရပါသည်။
Pay Sat Thu group isavoluntary organization with three people: Ma Lin Lin New, U Kaung Myat Oo and Ma Khine Thuzar.
They have experienced in working with many stakeholders in delivering health programme especially to the venerable public. They had no opportunity to work with government department.
Pay Sat Thu received small grant from PEACE project and they will able to do many awareness and advocacy programmes. They learned how to work effectively with government health department.
They also work together with the government to provide health awareness to the public. The group is well known as supplier of free oxygen to the needy population and the government and private hospital have relied on their services for many years.
“Although the government department and health service providers are eager to provide education to the public, they are short of staffs and challenge by many patients and public who need their services. One of the achievements of this group is to undertaken assessment on feedback mechanism which was very beneficial to access the quality of health services by the public. This assessment has actually providedalot of credits to Pay Sat Thu asagovernment recognized this initiative asavery good mechanism to improve health services” said U Kaung Myat Oo.